Izay antenainay amin'ny iPhone 6 | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Izay antenaintsika amin'ny iPhone 6
Ny fahatongavan'i iPhone 6 saika manodidina izany; afaka volana vitsivitsy dia ho hitantsika izay tena izy Apple dia nanomana anay ary raha tsaho sy fivoahana marobe tokoa no tonga tamin'ny faminaniany. Raha tonga io fotoana io dia misy ny mpikambana ao amin'ny ekipa Applelised Tianay hambara aminao izay antenainay manokana sy tadiavinay avy amin'ny finday avo lenta indrindra nandritry ny fito taona lasa: ny iPhone 6.
1 Izay andrasan'i Kaisara amin'ny iPhone 6
2 Inona no antenain'i Jose amin'ny iPhone 6
3 Inona no andrasan'i Manuel amin'ny iPhone 6
4 Izay andrasan'i Marco amin'ny iPhone 6
Inona César Mijanona ny iPhone 6
Izaho manokana, na dia antenaiko hisy tsy ampoizina lehibe aza Apple inona no ho iPhone 6, Lafiny telo lehibe no ifantohako.
Ny voalohany amin'ireo dia ny efijery, izay raha ny tsiliantsofina efa nitombo haingana rehefa mandeha ny fotoana, dia hamboarina amin'ny safira ary noho izany dia tena mahatohitra ny rangotra na ny vaky, toy ny amin'izao fotoana izao ny Gorilla Glass, izay na dia mahatohitra mafy aza dia mbola mitohy manimba fisehoan'ny fitaovantsika.
Lafiny iray hafa manandanja izay antenaiko hifantohan'ny Apple dia ny faharetan'ny Battery, satria araka ny fantatra, na eo aza ny fanatsarana rehetra an'ny iOS, ny bateria iPhone ho an'ny maro dia tsy tonga amin'ny faran'ny andro; Vaovao be ny mahazo batterie capacité lehibe kokoa, izay hahafahantsika manatratra ny faran'ny andro nefa tsy mampifandray ny fitaovantsika amin'ny herinaratra.
Vaky ny bateria iPhone 6 voarohirohy tamin'ny volana aprily lasa teo
Farany, manantena fanatsarana aho amin'ny lafiny fakan-tsary aloha sy aorianaIreo roa ireo, na dia kalitao tena tsara aza izy ireo, dia mamela antsika maniry bebe kokoa, antsipiriany izay mety ho kely indrindra, saingy ireo antsipiriany ireo no afaka mamorona sary tsara, ary na dia tsy manantena fakan-tsary misy megapikselika mihabe aza aho. sahala amin'ny natolotry ny orinasa hafa azy ireo, antenaiko fa misy fakan-tsary misy fihatsarana tsy ho an'ilay manaraka ihany toy izay efa fanaony Apple, fa eo anoloana ihany koa, izay no manamarika ny tsy fahampiana lehibe indrindra.
Inona Jose Mijanona ny iPhone 6
Izaho manokana mifantoka famolavolana, bateria sy vidiny / fahafaha-manao. Tiako ny hevitra a iPhone 6 lehibe kokoa, somary mahia ary miaraka amina endrika mitovy na aingam-panahy avy amin'ny maodely iPad na iPod Touch ankehitriny: miolakolaka bebe kokoa ary endrika efamira vitsy kokoa.
Raha ny amin'ny Battery, Miombon-kevitra amin'i Cesar aho: Maniry aho ary manantena fa hanatsara ny Apple fizakantenan'ny iPhone 6. Tsy faniriana intsony izao fa filàna tsy maintsy valiana. Tianay ny hahatratra ny faran'ny andro, farafaharatsiny, miaraka amin'ny bateria ao amin'ny fitaovantsika.
Farany, ny vidin'ny iPhone 6. Manaraka ny hetsika farany ataon'ny orinasa momba ny vokatra hafa toy ny MacBook Air, ny Apple TV, ny Mac Mini na ny iPod Touch, manantena aho fa ny Apple farafaharatsiny mitazona ny vidiny amin'ireo maodeliny 4,7-inch ary manomboka amin'ny 32GB izy ireo fahaiza-manao.
Inona Manuel Mijanona ny iPhone 6
Ny iray amin'ireo zavatra lehibe antenaiko dia ny efijery lehibe kokoa, izay amin'ny lafiny rehetra dia saika manamarina izany ny tsaho rehetra, ho fanampin'izany, ny fahaizany mitahiry farafahakeliny dia 32 GB satria raha te hanararaotra ilay processeur vaovao ary koa ny fampidirana ilay 64-bit dia azontsika atao ny tombony an'io amin'ny lalao sy amin'ny fahaizany kely toy ny 16GB dia tsy ampy hanararaotana ny iPhone.
Una fakan-tsary tsara indrindra miaraka amina vahaolana amin'ny fifaninanana mihoatra ny 16 MP, ao anatin'izany ny fanatsarana izay ankasitrahana ao amin'ny fakantsary eo aloha. Ny sasany koa fitaovam-pandrenesana izay mifandray bebe kokoa ary manatsara ny kalitaon'ny feo satria ambany dia ambany ny kalitaon'ny Earpods.
Fisehoana manintona kokoa ao anatiny iOS 8 ahafahantsika mifandray bebe kokoa ary tsy mila jailbreak. Ho fanampin'izay, mpandahateny anatiny mahery vaika kokoa satria matetika aho tsy mandre ny iPhone koa ovao ny feo ho an'ny tsara kokoa; manohy mitazona ny ID ny famandrihana ary ento koa ny sensor nampanantenaina hifaneraserana amin'ny sehatry ny fahasalamana toy ny tosidran'ny fo sy ny hafa.
Fanatsarana ny fandraisana signal satria farafaharatsiny any Kolombia dia tsy tsara 100%. Ary azo antoka fa zavatra tena manan-danja tokoa, ny fiainana bateriaEny, manana iPhone noforonina isika mba hanaovana asa mahatalanjona fa ny bateria kosa dia manakana antsika tsy hanao ireo hetsika ireo. Hevitra mahaliana hafa dia ny fametrahana tombo-kase tsy misy rano, tiako ny dock-n'ny orinasa, na ny charger de chargement tsy misy tariby, fa ny sensor akaiky dia mampifanaraka ny asany hifandray amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny fihetsika, izay manazava ny paoma ireo fampandrenesana Ary, mazava ho azy , processeur sy memory ram tsara kokoa ary mijanona ny vidiny na tsy mitombo be loatra.
Izay andrasan'i Marco amin'ny iPhone 6
Mba hanazavana izay antenaiko avy iPhone 6Ankoatry ny daty famoahana ho avy faran'izay haingana dia manana zavatra maro hifantohana aho.
Voalohany indrindra ary araka ny efa nolazain'ny mpiara-miasa amiko (ary heveriko fa misy mpampiasa iPhone mampiasa azy io) ny bateria heveriko fa mbola ombelahin-tongony Achilles an'i Apple ary zavatra andrasantsika fatratra ny fanatsarana. Izy ireo dia tsy afaka mampiditra bateria manana fahaiza-manao ampy raha tsy mahafoy ny endrika famolavolana (tsy azo kitikitika ho an'i Apple). Matahotra mafy an'izany aho amin'ny tranga iPhone 6 Hanana endrika mahavariana isika, saingy bateria tsy haharitra mandritra ny andro iray manontolo.
iPhone 6 noforonin'i Tomas Moyano sy Nicolàs Aichino mifototra amin'ny fampahalalana efa misy
Etsy ankilany dia te hiresaka momba ilay "fahefana”. Ny iPhone dia tsy manana isa marobe, tiako holazaina fa amin'izao fotoana izao, ny hafainganam-pandehan'ny iPhone 5S dia tsy ny avo indrindra eny an-tsena, saingy mbola tsy hitako mihitsy ny nanangana iray indray satria voasakana na tsy mamaly, ny fifindrana eo amin'ny efijery sy Ny app no ​​rano be hitako indrindra na dia mikarakara rakitra multimedia na tsy misy toerana fahatsiarovana malalaka aza. Izany no antenaiko fa miaraka aminy izany iPhone 6 araho ny tsipika mitovy amin'ny fitambarana tonga lafatra misy eo amin'ny fahefana sy ny fahombiazan'ny rindrambaiko ao anatin'ny fitaovana iray.
Farany, ary ahoana no fomba hafa, tsy maintsy resahiko vidinyTsy handà izany izahay, Apple mandany be amin'ny vidiny, nefa tsy misy fiatraikany amin'ny varotra izany. Fa maninona? Ny valiny dia kalitao. Rehefa mividy Apple ianao dia mividy kalitao sy famoronana ary lafo io, tsy ho voafitaka isika. Ka ho azy iPhone 6 Tsy manantena fihenam-bidy goavana aho (heveriko fa tsy tokony hadinontsika izany) fa manantena aho, araka ny efa nolazain'ny mpiara-miasa amiko Josefa, fa mitazona ny vidiny ao amin'ny faritra 4,7-inch izy ireo ary manafoana ny maodely 16 GB.
Ary hatreto izay rehetra antenainay ao amin'ny Apple dia mitanisa ny iPhone 6. Manantena izahay fa tsy nankaleo loatra ianao ary ambonin'izany rehetra izany, ny filazanao ny hevitrao, izay ilazanao aminay amin'ny hevitra izay antenainao avy amin'ny iPhone 6?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Izay antenaintsika amin'ny iPhone 6
Sakano ny mrlmedia.net Trojan tsy hametraka amin'ny Mac
Sintomy ny horonan-tsary na horonam-peo amin'ny Mac avy amin'ny mpilalao media Safari